Kooxda Real Madrid oo qarka u saaran inay heshiis cusub ka saxiixato mid ka mid ah xiddigaheeda – Gool FM
(Yurub) 11 Abril 2020. Sida wararku ay sheegayaan kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa qarka u saaran inay heshiis cusub ku abaal-mariso ciyaaryahankeeda Federico Valverde.
Tababare Zinedine Zidane ayaa la soo warinayaa inuu riixayo maamulka Kooxda Real Madrid inay gacanta u geliyaan Federico Valverde qandaraas cusub oo horumarsan.
21-sano jirkan ayaa si weyn isugu muujiyay Tababare Zidane xilli ciyaareedkan, wuxuuna ku abaal-mariyay macallinkiisa bandhigyo cajiib ah.
Valverde waa mid ka mid ah ciyaartoy ugu dakhliga yar kooxda koowaad ee Madrid, laakiin warbixin ka soo baxda Spain ayaa soo jeedinaysa in xiddiga reer Uruguay laga yaabo inuu dhowaan helo mushahar kordhin.
Zidane ayaa la sheegayaa inuu doonayo inuu heshiis cusub la gaaro laacibkan sida ugu dhaqsaha badan, inkastoo Valverde uu weli haysto saddex sano oo uga harsan qandaraaskiisa haatan uu kula jiro Los Blancos.
Warbixinta ayaa tilmaamaysa in xiddigan ka soo baxay akadeemiyada lagu wareejin karo qandaraas qiimahiisu yahay 4.4 milyan oo dollar sanadkii, kaasoo soconaya illaa dhammaadka xilli ciyaareedka 2024-25.